१६ औं चरणको सत्याग्रह थालेको डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै - पोखरा समाचार
पोखरा । १६ औं चरणको सत्याग्रह थालेको डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको छ । इलाममा सत्याग्रह सुरु गरेको चौथो दिन शनिबार उनको स्वास्थ्यमा जटिल समस्याहरु देखिन थालेका हुन् । चिकित्सकहरुले बिहान उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए ।शुक्रबारसम्म भूइँमै सुतिरहेका केसीलाई आजबाट आफ्नो शरीर थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बेडमा सारिएको छ ।
यसैबीच चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका डा. केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसारकै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्नुपर्नेलगायतका ६ बुँदे माग गर्दै डा. केसी गत बुधबारदेखि सत्याग्रहमा बसेका हुन् । डा. केसीको रेखदेखमा खटिएका स्थानीय डा। रामकृष्ण आचार्यले स्वास्थ्यअवस्था कमजोर बन्दै गएको बताए ।